“Xaalkeenu Maaha sidaad moodo.”. – Gool FM
“Xaalkeenu Maaha sidaad moodo.”.
(Manchester) 10 Nof 2018. Ka hor kulanka berito ee Manchester Derby, Tababare Pep Guardiola ayaa dadka u xaqiijiyay inuu aad u wacan yahay xiriirka kala dhexeeya Jose Mourinho isla markaana xiriirkoodu uusan ahayn sida ay dadku moodaan
Macalinka reer Spain ayaa sidoo kale ka hadlay muhimmada taageerayaasha u leeyahay kulanka Man City vs Man United.
“Waa kuwa gaar ah dhammaan kulamada Derbiga ah,” Guardiola ayaa sidaa yiri.
“Ma ahan kulanka ugu wayn kal ciyaareedka.
“Wax wayn ayuu kulanka uga dhigan yahay Taageerayaasha waana mid gaar ah maxaa yeelay waad garaaci kartaa kooxda aad la xifaaltameyso ama ma garaaci kartid, laakiin weli waxaa la joogaa uun bisha November.
“Kulanka ku celiska ee ka dhici doona Old Trafford ayaa aad u muhiim ah.
Mar wax laga waydiiyay Xifaaltanka kala dhexeeya Mourinho ayuu Guardiola ku jawaabay:
“Nasiib wanaag, aad ayuu u fiican yahay.
“Ugu dambeynna, waxaan nahay dad fiican, kana wanaagsan sidaad moodo.”.
“Waxaa muhiim ah inaan u ciyaarno sida ugu wanaagsan kulanka Manchester derby” - Guardiola